Jose Mourinho oo laxiridoono hal sano | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Jose Mourinho oo laxiridoono hal sano
Tababaraha kooxda Man United ayaa aqbalay qaladkiisa ah inuu canshuur la dhuuntay xiligii uu Spain ka hawl galaayay haatana waxaa lagu riday xukun hal sano xarig ah.
Xaakimiinta Spanish-ka ah waxay macalin Jose Mourinho ku eedeeyeen inuu bixin waayay 3.3-milyan oo euro ah canshuur ahaan looga rabay waxaana lagu riday xukun min lix bilood ah labo xili oo kala duwan canshuur bixintii uu ka dhuuntay.
Sida wargeska El Mundo ee Spanish-ka ah ogaaday Jose wuxuu heshiis la gaaray xaakimiinta Spanish-ka ah kadib markii uu qaladkiisa gartay wuxuuna bixin doonaa 1.98-milyan oo euro ah ganaax ahaan.
Sharciga Spain wuxuu dhigayaa qofka marka kowaad dambi lagu helo haddii xukunkiisa 2-sano ka yar yahay sidoo kalena fal dambiyeed uusan galin inuusan xabsi toos u galeyn, sidaa darteed Jose Mourinho oo dambigiisa qirtay xabsi ma gali doono balse ganaaxyo lacageed ayaa laga rabi doonaa.
Dhibaatada canshuuraadka Spain ee dadka caanka ah la dhuuntaan ama aysan bixin waa mid mudo soo jirtay ayadoo Cristiano Ronaldo dhawaan lagu heestay dambigan sidoo kalena uu qirtay wuxuuna bixiyay 14.7-milyan oo euro ah halkii uu xabsi gali lahaa.